Fihoaram-pefy amin’ny fitaterana: sarona ny kamiaon’ny tafika nitondra mpandeha an-tsokosoko | NewsMada
Par Taratra sur 09/05/2020
Tsy tan-dalàna sy mafy loha avokoa. Sarona tamin’ny lalam-pirenena faharoa (RN2) ny kamiaon’ny tafika nanangona mpandeha ary nikasa ny hitondra azy ireo ho any Moramanga. Niseho izany, iray andro taorian’ny fahasorenan’ny filoha amin’ny tompon’andraikitra sasany any Toamasina.
Nisy naka sary ny fanangonana mpandeha nataon’ireo nitondra ny kamiao sy ny mpanera, omaly vao maraina tamin’ny 5 ora, teo amin’ny RN2 eo amin’ny fiantsonan’ny taksiborosy Tanambao. Tsy tahotra tsy henatra fa mitondra takelaka mena sy misy ny mari-pamantarana ny Covid-19 sady fiaraben’ny tafika miloko maitso antitra izao no manao izany. Nisy nampilaza avy hatrany ny governora sy ny prefet ho an’ny faritra Atsinanana. Tsy niandry ela fa nidina avy hatrany teny amin’ny sakana ara-pahasalamana Antsarimasina mba hanamarina ny loharanom-baovao izy ireo. Sarona tamin’izany ireo mpandeha miisa enina be izao sady efa nakana saran-dalana.
Hihazo an’ i Moramanga ny sasany amin’izy ireo. Nentina nanaovana fanadihadiana etsy amin’ny vondrontobim-pileovan’ny zandary ireo miaramila nitondra ilay kamiao.
Tsiahivina fa avy any Antananarivo ary nitondra entana nilaina nandritra ny fitsidihan’ny filoham-pirenena teto Toamasina ity fiara ity. Nampiasa mpanera izy ireo rehefa hiverina mba hitady mpandeha eo amin’ny fiantsonan’ny taksibrosy vao maraina be.
Etsy andaniny, fantatra fa mahita mpandeha hatrany ireo mpanera eo ireo tato anatin’ny herinandro mahery.
Gaboraraka sy tsy fandraisana andraikitra
Mandefa ireo olona hitany amin’ny fiaram-panjakana sy fiara tsotra na kosa misy ny fahazahoan-dalana sy marika “Covid-19” izy ireo. « Mba mahazo kandra (asa) izahay nefa koa malahelo amin’ny tsy fahafahan’ny taksiborosy miasa. Nahoana ny fiaram-panjakana no hitaterana mpandeha hakana saran-dalana nefa efa mandray karama amin’ny maha mpiasam-panjakana azy. Tokony hitondra fotsiny izy raha malahelo ny olona fa tsy maka vola… », hoy ireo mpanera.
Nantitranterin’ny filoham-pirenena anefa ary anisan’ny nahasorena azy ny gaboraraka sy ny tsy fandraisana andraikitra, indrindra fa ny mpitandro filaminana. Tsy maina akory ny ravina nihinana, nipoitra sahady izy izany.